ရတနာပုံ မန္တလေးရှိ ပြန်တမ်းဝင် အစ္စလာမ်သာသနာ့ ဝတ်ကျောင်းတော်များ List of Masjids in Mandalay | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« BERTIL LINTNER: The Muslims of Myanmar
Homeland TV series ‘exposed’ the dirty tactics of CIA, drones and Inter-Services Intelligence of Pakistan »
ရတနာပုံ မန္တလေးရှိ ပြန်တမ်းဝင် အစ္စလာမ်သာသနာ့ ဝတ်ကျောင်းတော်များ
မန္တလေးနှစ် (၁၅၀) မဂ္ဂဇင်း မှတဆင့် ပြန်လည်ဖော်ပြပါသည်။
မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၁ခု ဆိုလျှင် မန္တလေးနှစ်(၁၅၀)ပြည့် ကျင်းပရတော့မည်။ အတိတ်ကို အတိတ်မှာ ထားခဲ့လို့မရ အတိတ်မှာ ဖြစ်စဉ် ဖြစရပ်များ-သမိုင်းကြောင်းများ-လေ့လာဖတ်ရှုသိနားလည်ပြီး တန်ဖိုးထား ထိန်းသိမ်းကြရေးအတွက် အမွေခံမျိုးဆက်တို့အား အသိပေးရန် တာဝန်ဖြစ်လာသည်။
ရွှေမန္တလေးသို့ ရှိ အစ္စလာမ်သာသနာဝင် ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်တွေဟာ ဘုရင် မင်းတုန်းမင်း တရားကြီး လက်ထက်မှာ မင်းနှင့်လွှတ်တော်က ပြန်တမ်းဝင် တည်ဆောက်ခွင့်ပြုခဲ့တာပါ။
လွတ်လပ်ရေးမှာ ဦးဆောင်ဦးရွက် အနစ်နာခံစွန့်လွတ် ပါဝင်သူတွေကို တန်ဖိုးထား ဂုဏ်ပြုတဲ့အ နေနဲ့ စည်သူ-ဝဏ္ဏကျော်ထင်-ဇေယျကျော်ထင်-သီရိပျံချီ-လွတ်လပ်ရေးမော်ကွန်းဝင် ဘွဲ့တံဆိပ်-ငွေ-နေထိုင်စရာမြေများ-ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့သလို ရှေးဘုရင်မင်းမြတ်တွေက မဟာမင်းထင်ရာဇာ-မဟာမင်းကျော်သီဟမင်းထင်-မင်းထင်သိဒ္ဓိရာဇာ-မဟာဘောဂဓန-သီရိရာဇာ-မဟာဘော ဂဓန သေဌသီရိရာဇာ-မဟာသီရိသုခသေနအနာတပိန်-မဟာသုဝဏ္ဏသေဌ-မေဏ္ဍတမဟာသာလ စ သည့် ဘွဲ့ဂုဏ်ထူးများနှင့်အတူ နေမြေ စားမြေများပင် ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း ကုန်းဘောင်ဆက် မ ဟာရာဇဝင်တော်ကြီး တွေမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဝတ်ကျောင်းတော်တွေကို နန်းတွင်း ယခု ကျောက်တိုင်အရှေ့ဘက်နေရာမှ ရွေးလက်ျာ တပ်သား တွေ အတွက် မင်းတုန်းမင်းကြီးကိုယ်တိုင် ရွှေပန္နက်ရိုက် တည်ဆောက်ပေးခဲ့တယ်။(ရွေးလက်ျား သေနတ်တော်-အမြောက်တပ်-မြင်းတပ်-ကိုယ်ရံတော်တပ်-ကင်းတားတပ်)။
ဒါတွင်မက-မြန်မာပြည်မှ မက္ကာသို့ ဟာဂ်ျမွန်မြတ်သော သာသနာ့တာဝန် ခရီးသွားလာသူများ တိုင်းတစ်ပါးမှာ မျက်နာမငယ်ကြစေဖို့(ဗရမာရိုဘတ်) ဒေါင်းတံဆိပ်ခတ်နှိပ်သည့် ဇရပ်တော် ကြီးကို ကိုယ်စားလှယ်တော် စေလွှတ်တည်ဆောက် လှူဒါန်းတော်မူခဲ့ပါသည်။
အစ္စလာမ်သာသနာဝင် ရွေးလက်ျားအမှုထမ်းတို့မှာ ရွှေပန္နက်ဗလီ အနီး နန်းတွင်း အရှေ့တောင် ထောင့်တွင် နေထိုင်စေခဲ့ပါသည်။ ကျော်မိုးတံခါး၏ တောင်ဘက် မင်္ဂလာတံတား၏ အနောက် တောင်တွင် ကင်းတား ကုလားပျိုတပ်နှင့် မိသားစုများ နေထိုင်စေခဲ့ပါသည်။ ဗလီဝတ်ကျောင်း တော်ကို သံတော်ဆင့်ဦးဘိုးက မျိုးနွယ်စုများအတွက် တည်ဆောက်ပေးခဲ့သည်။
နန္ဒဝန်ဥယျာဉ်းမှုး ဦးဖိုးဆက်တို့ကို ကုန်းရိုးကုန်းတန်းဗလီ ဝတ်ကျောင်းတော် ဝန်းကျင်တွင် နေ ထိုင်စေခဲ့သည်။ သူဌေးတန်းဗလီ ဝတ်ကျောင်းတော်အနီးတွင် မဟာသီရိသုခသေဌ အနာထပိဏ် သူဌေးဦးစိန်နေထိုင်စေခဲ့သည်။ စစ်ကိုင်းတန်းဗလီ ဝတ်ကျောင်းတော်မှာ မြမန်းစင်္ကြာ သင်္ဘော တော်စီး အဝယ်တော် ဦးမြနှင်း စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး သမက်-သမာဓိမြို့ဝန် -စိန်ဦးစလေမန်က ဆက်လက်တည်ဆောက်လှူဒါန်းခဲ့သည်။
အရှေ့ပြင်မင်းကြီး မဟာမင်းထင်ရာဇာ ဦးချုံ၏(ရွာသာ)အက္ကပတ် မြင်းတပ်အတွက် ဗလီဝတ် ကျောင်းတော်တည်ဆောက်ထားသကဲ့သသို့ ခံစစ်ဗိုလ်နေမျိုး ဂုဏ္ဏရတ်၏ သားဝလီခန် မြင်းတပ် ဗိုလ်နှင့် တပ်သားများအတွက် ဝလီခံဗလီ တည်ဆောက်စေခဲ့သည်။ တောင်ပြင်သကျနွယ်စဉ်ရပ် စင်္ကြာ အမြောက်တပ်မှ ဗိုလ်မင်းဟာရှင်၏ စကြာဗလီ ဝတ်ကျောင်းတော်- အမြောက်တပ်မှူး ဦးရာသော်၏ ဖလန်ဗိုလ်ဗလီ ဝတ်ကျောင်းတော် -ဗိုလ်မင်းဦးကြယ်၏ ဗုံးအိုးဗလီဝတ်ကျောင်း တော် –
ဗိုလ်မင်းဦးရောက်(ယောက်)၏ မင်္ဂလာဗလီ ဝတ်ကျောင်းတော်- ဗိုလ်မင်းဦးမောင်၏ ဆူးလေ ဗလီ ဝတ်ကျောင်းတော် -သွေးသောက်ဦးပြောင်း၏ လက်ပံဗလီ ဝတ်ကျောင်းတော်(တံခါး မှူးနှောင်း) အသီးသီးတည်ဆောက်စေခဲ့သည်။စင်္ကြာအနောက်ဗလီ ဝတ်ကျောင်းတော် ကို ကသည်း ရက္ခိုင် အိမ် ကြီးဦးအီစမံအင်(ခေါ်)အဒါသန့်မှ တည်ဆောက်ခဲ့ ရာ တူ-တူမတို့မှ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခဲ့ပြန် တယ်။
မင်းတုန်းမင်းအနောက်တော်ပါ ကုန်သည်တော် ဦးဘိုးမှ ဂျွန်းဗလီဝတ်ကျောင်းတော်ကို တည် ဆောက်ခဲ့သည်။ အမြောက်တန်းလေးဗလီကို သွေးသောက်ဦးရန်နိုင်မှတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ အခွန်တော်ဝင်ဘာကာရ် အလီမှ ရှီအာဗလီဝတ်ကျောင်းတော်ကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
သူကြွယ်မင်း ဦးစံပျော်-ဦးစံသီး တူအရီးက တောင်ဆင်ကျုံးဗလီဝတ်ကျောင်းတော်နှင့် မြောက် ဆင်ကျုံးဗလီဝတ်ကျောင်းတော်များတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ကုန်သည်တော်ဦးခေါင်း မင်းဦးချိန်ှ အနုပညာ လက်ရာမြောက် ရတနာပုံအိုးဘိုးဗလီ တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဘုရင့်ရာဖြတ်ကေသီ ဦးဖိုးသက်မှ အိုးတော်ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်ကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
တောင်ဘလူရပ်ဗလီကို စာဆိုတော်ဦးနုမျိုးနွယ်များက တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ တောင်ပိုင်းတွင် ဘုရင့်ကိုယ်ရံတော်တပ်အတွက် ကိုယ်ရံတော်ဗလီ ဘုရင့်အပ်ချုပ်အမှုတော်ထမ်းများအတွက် အပ်ချုပ်ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်များ တည်ဆောက်ခွင့် ပြုခဲ့သည်။
အခြားဗလီဝတ်ကျောင်းတော်များ ကျန်ရှိသည်။ မန္တလေးမြို့တော်သစ်တည်ဆောက်ရာ အမရပူရ ခေတ်မှ ရှေးဟောင်းဗလီဝတ်ကျောင်းတော် ၁၁ လုံးအနက် ၂လုံး ပျောက်ပျက်သွားသည်။ မင်း တုန်းမင်းတရားကြီး လက်ထက် ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်(၃၅)ဆောင် သီပေါမင်းတရား ကြီး လက် ထက် ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်(၂၃)ဆောင် တည်ဆောက်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
ရတနာပုံခေတ်တွင် ဗလီဝတ်ကျောင်းတော် ပေါင်း(၆၇)ဆောင် ရှိခဲ့ပြီး ၎င်းအနက်(၄)ဆောင်မှာ ၁၉၄၂ခုနှစ် ဗုံးဒဏ်သင့်ခံရ၍ လုံးဝပျက်စီးသွားခဲ့သည်။ ကိုလိုခေတ်တွင် ဝတ်ကျောင်းတော်(၉)ကျောင်း ခွင့်ပြုချက်ရရှိခဲ့သည်။
တင်ပြပါဗလီဝတ်ကျောင်းတော်များကို မြေနေရာဝယ်ပြီး တည်ဆောက်ခဲ့တာလား နယ်ချဲ့အင်္ဂ လိပ်တွေက ပေးတာလားလို့ များသောအားဖြင့် မေးမြန်းလာပါတယ်။ဘုရင်တွေ လက်ထက်က သစ္စာတော် အမှုထမ်း အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအတွက် ဘုရင်မင်းမြတ်တွေ ချီးမြှင့်မြောက်စား ထားခဲ့ကြောင်း တင်ပြရင်း နိဂုံချုပ်အပ်ပါသည်။
(မန္တလေးနှစ်(၁၅၀)ပြည့်မဂ္ဂဇင်းမှ မောင်မောင်ကြီး(မန်း) )
၁-ကုန်းဘောင်ဆက် မဟာရာဇဝင်တော်ကြီး တတိယအတွဲ
၃-ကန္နိစစ်ကဲမင်းထင်ရာဇာ၏ မန္တလေးရတနာပုံ မဟာရာဇဝင်တော်ကြီး
၅-ရာဇဝင်သုတေသီ ရွှေဘိုဦးဘဦး၏ ရွှေမန်းအနှစ်(၁၀၀)ပြည့် မြန်မာမွတ်စလင်မ် အတ္ထုပ္ပတိ
၆-ခေတ်ဟောင်းမြန်မာ့သမိုင်း သုတေသန အဘိဓာန်
၇-မောင်မောင်ကြီး(မန်း) မင်းနှင့်လွှတ်တော်က တည်ဆောက်ခွင့်ပြုခဲ့သော ပြန်တမ်းဝင် အစ္စလာမ်သာသနာ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်များ ။
ဓာတ်ပုံ – drama 1942( Google Project) မင်းတုန်းမင်း ( ခရစ်သက္ကရစ် ၁၈၀၈ – ၁၈၇၈) လက်ထက်တွင်၊ မင်းတုန်းမင်း၏ နောက်တော်ပါ ကုန်သည်ကြီး ဦးဘိုး က မင်းတြားကြီး၏ ခွင့်ပြုပေးသနားတော်မူသော မြေနေ ရာတွင် ၀ကားဖ်ပြု ဆောက်လုပ်လှုဒါန်းခဲ့သော ရတနာပုံ မန္တလေး ရွှေမြို့တော်ရှိ ဂျွန်းဗလီ ၀တ်ကျောင်းတော်ကြီး။
READ MY CONTRIBUTIONS IN WIKIPEDIA:
List of Masjids in Mandalay. During Pagan Min reign, Mindon Prince and brother Ka Naung Prince run away with their servants to Shwe Bo and startedarebellion. U Bo and U Yuet were the two Muslims who accompanied the princes. Some Kala Pyo Burmese Muslim artillery soldiers followed them.
In the Royal Defence Army, many Cannon-crew members were Kindar Kala Pyos and Myedu Muslims. Captain Min Htin Min Yazar’s 400 Muslims participated to clear the land for buildinganew Mandalay city. Kabul Maulavi was appointed an Islamic Judge by King Mindon to decide according to the Islamic rules and customs on Muslim affairs. Burmese Muslms were given specific quarters to settle in the new city of Mandalay King Mindon donated his palace teak pillars to buildamosque at North Obo in central Mandalay. His Majesty also permittedamosque to be built on the granted site for the Panthays Burmese Chinese Muslims. Inside the Palace wall, for the Royal Body Guards, King Mindon himself donated and started the building of the Mosque by laying the Gold foundation at the South-eastern part of the Palace located near the present Independent Monument. This Mosque was called the Shwe Pannet Mosque. That mosque was destroyed by the British to build the Polo playground. The King donated the rest house in Mecca for his Muslim subjects performing Hajj.
S/N Mosque Situation Donor Quarters Built Comment/present administrator
15 Shwe Phone Shein Phayagyi Kamman Captain U Shwe Oh et al. 829 1785 Hj U Ba Khin and et al.
S/N Mosque Situation Built ‘ ‘ Comment/present administrator
This entry was posted on October 14, 2014 at 6:34 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.